Ny fampiharana fampakaram-bady 7 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Aaron Rivas | | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Betsaka ny olona te-hifamatotra amin'ny olona manokana aorian'ny nahalalany fotoana fohy, ary noho izany dia mahazatra ny manao azy ara-dalàna. Tsy resaka finamanana na fifandraisana no resahanay, fa ny fiarahan'ny mpinamana, izany hoe: raha tianao - ny dingana alohan'ny fanambadiana, ny fihetsika namboarina fa ny firaisana dia vita tamin'ny alàlan'ny fampakaram-bady, zavatra izay, ankoatr'izay, matetika. ny lohahevitry ny fanomanana sy raharaha hafa mifandraika amin'izany.
Soa ihany, ho an'ireo izay te-hikarakara mariazy, misy fampiharana marobe ao amin'ny Google Play Store ho an'ny Android izay natao hampiasaina ho fitaovana fanampiana amin'ny fandaminana sy ny drafitry ny mariazy. Manaraka izany dia hanao lisitra ireo rindranasa 10 tsara indrindra ho azy izahay, izay, ho fanampin'izany, dia maimaim-poana.
Amin'ity famoriam-bola ity dia hahita fampiharana isan-karazany ianao izay, ankoatra ny fanampiana anao handamina ny fampakaram-badinao tena tsara, dia hanolotra fitaovana hafa sy asa maro samihafa hamoronana azy.
2 Zankyou - Lisitry ny fanambadiana & Fikambanan'ny fampakaram-badinao
3 Lisitra sy teti-bola nataon'i Wedbox
4 Weddi - Planner amin'ny fanambadiana miaraka amin'ny lisitra
5 MyWed - Wedding Planner ho an'ny mpanambady
6 Ny Andro Be - Ny fanisana ny mariazinao
7 Karatra mariazy: fampiharana famoronana endrika ary maro hafa
Atombotsika amin'ny lisitra iray amin'ireo fangatahana fampakaram-bady feno indrindra ao amin'ny Play Store. Ary izany ve Ny Weddings.net dia rindrambaiko iray izay manome anao fanampiana amin'ny fandaminana saika ny lafiny rehetra amin'ilay fampakaram-bady tadiavinao izay ao an-tsainao, manao ny drafitra ho asa tsotra sy tsy sarotra.
Ho fanombohana, dia manome repertoire misy fifandraisana maherin'ny 50 arivo amin'ny mpanampy sy mpiasa izay mpaka sary, florist ary maro hafa. Izy io koa dia misy Fampiasana amin'ny teti-bola izay manampy anao hitsitsy kokoa ny vola laninao amin'ny fampakaram-bady. Ho setrin'izany, ny fanasana sy ny fandaminana ny latabatry ny vahiny dia zavatra azonao atao drafitra mora kokoa ihany koa noho ny Bodas.net.
Raha manana fisalasalana amin'ny amin'ny fomba tianao hahitana ny fampakaram-badinao ianao, manomboka amin'ny haingon-trano ka hatramin'ny fomban'io, ity fampiharana ity dia misy koa fizarana ahafahanao mahazo aingam-panahy handrafitra azy. Ho afaka hitodika any amin'ny hevitra sy loharano azo antoka ianao fa hifanaraka amin'izay ao an-tsainao. Ho fanampin'izany, manana fizarana ahafahanao manangona toro-hevitra sy torolàlana isan-karazany, ary koa ny zavatra niainan'ny mpampakatra sy ny mpivady, amin'ny mpamatsy hetsika sy ny fikambanana fampakaram-bady izay voatanisa ao amin'ny fampiharana.
Toy ny hoe tsy ampy izany, manolotra ihany koa katalaogin'ny akanjo mariazy mihoatra ny 20 avy amin'ny mpamorona ekena ary isam-bolana 5 euro dia alefa amin'ny fandraisana mpiasa na fitsidihana ireo mpamatsy izay misy amin'ny alàlan'ny fangatahana.
Zankyou - Lisitry ny fanambadiana & Fikambanan'ny fampakaram-badinao
Zankyou dia fampiharana hafa tena tsara izay dia hanampy anao handamina ny fampakaram-bady mora, haingana sy tsotra, fitaovana iray azo alaina amin'ny drafitra sy ny fitantanana ny vahiny ary ny fikarakarana latabatra, miaraka amin'ny fanamafisana ny fanatrehana sy maro hafa.
Raha te-handray mpiasa manana traikefa amin'ny fikarakarana sy ny drafitra fampakaram-bady ianao, ny lahatahiry orinasa sy mpamatsy izay ho hitanao noho ity rindrambaiko ity dia be dia be ary hanome ny ilainao, miaraka amin'ireo mpanampy manomboka amin'ny mpaka sary ka hatramin'ny mahandro. Ho fanampin'izany, amin'ity dia ity koa dia hahita toerana sy toerana mety hofanany ianao ahafahanao manatanteraka ny lanonam-panambadiana.
Amin'ity fampiharana ity dia hanana koa ianao torolàlana sy lahatsoratra izay hanondro sy hanampy anao tsikelikely amin'ny fomba famoronana, fandaminana ary fitantanana ny fampakaram-bady, miaraka amin'ny toro-hevitra mifandraika amin'izany, hevitra ahafahanao mahazo aingam-panahy amin'ny endriny sy ny lahatsoratra miaraka amin'ireo fironana farany arahinao, raha te-handray ny farany ianao. Misy ihany koa ny fiasa toy ny teti-bola ho an'ny fampakaram-bady, izay hanampy anao hitahiry ny zava-drehetra ary hanaraka ny vola laninao amin'ny fandaminana sy ny fifanarahana serivisy, ary ny fizarana ho an'ny tolo-bolo sy trano hipetrahana.
Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao dia azonao atao koa ny mangataka torohevitra manokana, izay maimaimpoana tanteraka ary hanampy anao amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy fisalasalana, izy io dia iray amin'ireo fampiharana feno indrindra amin'ny karazany.
Lisitra sy teti-bola nataon'i Wedbox
Raha mila mandamina ny drafitry ny fampakaram-badinao ianao amin'ny alàlan'ny lisitry ny lahasa azonao atao ny mitantana sy mamita feno, mba hahitana izay efa nataonao sy izay tsy hita amin'ny lanonana fampakaram-bady.
Mazava ho azy, Ny fampiharana iray feno tahaka ity dia manome anao fiasa mamela anao hitantana ny volanao sy ny teti-bolanao amin'ny famoronana sy fanatanterahana ny fampakaram-bady, ankoatry ny fanomezana fibaikoana tanteraka anao amin'ny fanatrehan'ireo vahininao, mba hahafantaranao hoe iza no tsy hanatrika ny fampakaram-badinao ary amin'izay dia tsy hahagaga anao noho ny tsy fahatongavanao na ireo vahiny be loatra.
Misy zavatra tena mahaliana amin'ny alàlan'ity rindranasa ity dia fiasa iray ahafahan'ny mpivady miditra amin'ny fizotrany, miaraka amina fampitambarana izay avela hiseho amin'ny alàlan'ny finday misy ny mpivady ny zava-bita rehetra, miaraka amin'ny dingana rehetra ary ny dingana vita. Amin'izay dia samy hahalala ny fivoarana vitanao ianareo tamin'ny fandaminana ny hetsika, fa tsy mila manavao na inona na inona tanana.
Azonao atao koa ny mampiasa Lisitra sy teti-bola nataon'i Wedbox hanome aingam-panahy anao amin'ny hevitra, torohevitra ary tolo-kevitr'ireo mpanambady hafa hisafidy ireo mpanome tolotra sahaza ho an'ny tetikasanao.
Developer: Wedsly Wedding Apps
Weddi - Planner amin'ny fanambadiana miaraka amin'ny lisitra
Ity dia fampiharana iray hafa izay mampiseho ny tenany ho mpanampy amin'ny fampakaram-bady tsara indrindra. Miaraka amin'ny lisitry ny lahasa azonao atao hilalao hahavita azy ireo, ianao no manendry sy manatanteraka azy ireo; rehetra mba hitazomana ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny fanomanana ny hetsika.
Weddi dia manolotra ny asany rehetra voalaza etsy ambony. Amin'ity fampiharana ity dia hanana eo am-pelatananao ianao fiasa amin'ny teti-bola izay hanampy anao hijanona ao anatin'ny zakanao ary, avy eo, mandoa ny zavatra rehetra efa nomanina sy nifanarahana. Inona koa, mamela anao hitantana ny lisitry ny vahiny sy hahazo kojakoja ho an'ny ampakarina, ankoatry ny zavatra hafa.
Safidy iray hafa tena tsara izay manana laza 4.5 kintana sy fisintomana an'arivony maro izay mitombo isan'andro isan'andro noho ny fampiasana lehibe an'ity fampiharana ity, izay hita taratra amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa azy.
Weddi - Mpandrindra mariazy
Developer: Fampakaram-bady sy fampiharana fisehoan-javatra
MyWed - Wedding Planner ho an'ny mpanambady
Mora kokoa ny mandamina sy mikarakara fampakaram-bady amin'ny MyWed. Ity rindranasa ity dia anisan'ny tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, fa tsy ho an'ny zava-poana.
Izy io dia miaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra mba hahamora ny fitandremana ny zava-drehetra ho an'ny hetsika fampakaram-bady, avy amin'ny lisitry ny vahiny voaomana sy voalamina tsara izay ahafahanay mitantana ny zava-drehetra momba azy io, manomboka amin'ny hoe iza no hankany amin'izay tsy handeha, ary lisitr'ireo latabatra azonao sokajiana isaky ny vondrona.
Zavatra mahaliana sy tena ilaina dia izany MyWed dia hitarika anao amin'ny fizotry ny fandaminana, milaza aminao hoe rahoviana ianao no tokony hanao izay narosonao, mba tsy hanadinoanao na inona na inona ary havaozina ny zava-drehetra. Izy io koa dia misy fizarana teti-bola izay hanampy anao tsy hihoatra ny zavatra natsanganao tany am-piandohana, zavatra tsara indrindra ho an'ireo olona manana tosika be loatra amin'ny fividianana. Ho setrin'izany, manana fiasan'ny mpandraharaha izy io ahafahanao manana ny angon-drakitra rehetra ananany ary miantso azy ireo rehefa mila izany ianao.
Ny naotiny 4.8-kintana miorina amin'ny fisintomana efa ho iray tapitrisa sy fanehoan-kevitra mihoatra ny 8.500 izay, amin'ny ankabeazany, dia tsara, mahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana fampakaram-bady tsara indrindra amin'ny Play Store sy ity fanangonana ity, noho izany dia tsy tokony hisalasala ianao amin'ny fitsapana izany.
Drafitra mariazy: asa, tetibola, fampifanarahana
Developer: App Wedding Planner
Ny Andro Be - Ny fanisana ny mariazinao
Ankoatry ny fampiharana izay manolotra anao ny fototra sy ilaina handaminana ny fampakaram-badinao tsara dia izy io izany dia misy fiasa isa isa izay manisa ny andro, ora ary minitra sisa ho an'io andro lehibe io.
Anisan'ireo mampiavaka azy indrindra ny ahitantsika ny ankamaroan'ny efa voalaza etsy ambony amin'ny fampiharana hafa, toy ny fiasa amin'ny teti-bola izay manampy anao hitahiry sy hitahiry ny zava-drehetra ao anatin'ny vola azonao, lisitra iray ho an'ny vahiny, lisitra tokony hatao ary fandaharam-potoana tsaratsara kokoa ny asa rehetra tokony hatao mba hahavitana ny zava-drehetra rehefa tonga ny fotoana.
TBD - Fanomanana fampakaram-bady
Developer: Ny fampakaram-bady amin'ny andro lehibe
Karatra mariazy: fampiharana famoronana endrika ary maro hafa
Ary farany, manana fangatahana mariazy hafa tena tsara izahay afaka manao karatra fampakaram-bady tsara tarehy ianaoNa manasa ireo izay tianao amin'ny fampakaram-badinao na miarahaba ny mpampakatra, ankoatry ny zavatra hafa.
Azonao atao ny manamboatra sy manamboatra ny volavolanao araka ny itiavanao azy, miaraka amina sary sy endritsoratra maro izay azonao ampidirina amin'ny karanao, mba hijanonany araka ny nieritreretanao azy ireo. Ho fanampin'izany, mamela anao manampy sary sy sary ao anaty karatra ny fampiharana.
Etsy ankilany, azo atao ihany koa ny miditra amin'ny emotikon sy tarehy marobe mba hanomezana fahafinaretana bebe kokoa na fitiavan'ny karatra ary hanoratanao ireo hafatra tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana fampakaram-bady 7 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao miakanjo 8 tsara indrindra ho an'ny Android